4 Na ɔsan fii ase kyerɛkyerɛe wɔ po no ano.+ Na nnipakuw kɛse bi betwaa ne ho hyiae, enti ɔkɔforoo ɔkorow tenaa mu wɔ po no so, na na nnipakuw no nyinaa wɔ po no ano.+ 2 Enti ofii ase de mfatoho+ kyerɛkyerɛɛ wɔn nneɛma bebree na ɔka kyerɛɛ wɔn wɔ ne nkyerɛkyerɛ+ mu sɛ: 3 “Muntie. Hwɛ! Ogufo bi fii adi sɛ ɔrekogu aba.+ 4 Na ɔregu aba no, ebi koguu kwankyɛn, na nnomaa bedii.+ 5 Na aba no bi guu baabi a abotan wɔ a dɔte pii nni, na esiane sɛ ankɔ dɔte mu pii nti ntɛm ara na efifii.+ 6 Nanso bere a owia puei no ekisae, na esiane ntini a enni nti ewui.+ 7 Na aba no bi koguu nsɔe mu, na nsɔe no nyinii na emiaa no, na ansow aba.+ 8 Na ebi koguu asase pa mu,+ na efifii na enyinii, na efii ase sow aba, ebi aduasa, ebi aduosia, ne ɔha.”+ 9 Ɛnna ɔka kaa ho sɛ: “Ma nea ɔwɔ aso a ɔde betie no ntie.”+ 10 Afei bere a ɛkaa ɔno nkutoo no, wɔn a wɔwɔ ne ho no ne dumien no fii ase bisabisaa no mfatoho no ho asɛm.+ 11 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo na wɔde ama mo sɛ monte Onyankopɔn ahenni ho ahintasɛm kronkron+ no ase, na wɔn a wɔwɔ akyi no de, wɔde biribiara ma wɔn mfatoho mu,+ 12 ma enti wɔbɛhwɛ de, nanso wɔrenhu, na wɔbɛte de, nanso wɔrente ase, na wɔrensakra mma wɔmfa mfiri wɔn da.”+ 13 Bio nso, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Munnim nea mfatoho yi kyerɛ, na ɛbɛyɛ dɛn na mobɛte mfatoho a aka no nyinaa ase? 14 “Ogufo no gu asɛm no.+ 15 Enti eyinom ne nea ekogu kwankyɛn, faako a wogu asɛm no, nanso wɔte ara pɛ a Satan beyi+ asɛm a wɔagu no fi wɔn mu.+ 16 Na eyinom nso ne nea woguu no abotan so no: wɔte asɛm no ara pɛ a wɔde anigye gye tom.+ 17 Nanso wonni ntini biara, na wɔtena hɔ kakra; afei asɛm no nti sɛ ahohia anaa ɔtaa ba ara pɛ a, ɛto wɔn hintidua.+ 18 Ebi nso woguu no nsɔe mu; eyinom ne wɔn a wɔate asɛm no,+ 19 nanso wiase yi mu dadwen+ ne ahonyade nnaadaa+ ne nneɛma a aka ho akɔnnɔ+ mia asɛm no, na ɛnsow aba.+ 20 Afei nea woguu no asase pa mu no ne wɔn a wotie asɛm no na wogye no fɛw so na wɔsow aba aduasa ne aduosia ne ɔha no.”+ 21 Na ɔtoaa so ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Kɛntɛn anaa mpa ase na wɔde kanea si anaa? Ɛnyɛ kaneadua so na wɔde si?+ 22 Na biribiara nni hɔ a ahintaw a wɔremmue so; biribiara nni hɔ a wɔde asie a ɛremma petee mu.+ 23 Obiara a ɔwɔ aso a ɔde betie no, ma ontie.”+ 24 Ɔka kyerɛɛ wɔn bio sɛ: “Monyɛ aso ntie asɛm yi yiye.+ Susukora a mode resusuw ama no, wɔde besusuw ama mo,+ na nokwarem no, wɔde bi bɛka ho ama mo.+ 25 Nea ɔwɔ no wɔbɛma no bi aka ho; na nea onni no de, nea ɔwɔ mpo wobegye afi ne nsam.”+ 26 Ɛnna ɔtoaa so kae sɛ: “Enti Onyankopɔn ahenni te sɛ bere a obi gu aba asase so,+ 27 na ɔda anadwo sɔre anɔpa, na aba no fifi na ɛyɛ tenten, a onnim ɔkwan a ɛfaa so yɛɛ saa.+ 28 Asase no ara de nkakrankakra sow aba; edi kan yi ahaban, afei ɛbɔ bɛtem, na aba ba bɛtem no ho. 29 Na sɛ enya sow aba a, ɔtwe so kantankrankyi, efisɛ na twabere adu.” 30 Na ɔtoaa so kae sɛ: “Dɛn ho na yɛde Onyankopɔn ahenni bɛtoto, anaa mfatoho bɛn na yɛde bɛkyerɛkyerɛ mu?+ 31 Ɛte sɛ sinapi aba a bere a woduae wɔ asase mu no, na ɛyɛ asase so aba nyinaa mu nea esua koraa+— 32 nanso sɛ wodua a, enyin bɛyɛ kɛse sen afifide afoforo nyinaa na eyiyi nkorata akɛse+ ma ewim nnomaa+ nya ne nwini ase tena.”+ 33 Enti ɔde mfatoho+ a ɛtete saa pii kaa asɛm no kyerɛɛ wɔn, sɛnea wobetumi ate ase. 34 Nokwarem no, wankasa ankyerɛ wɔn a mfatoho nka ho, na ɛka ɔne n’asuafo no nko a, ɔkyerɛkyerɛ biribiara mu.+ 35 Na onwini dwoe saa da no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momma yentwa nkɔ asuogya.”+ 36 Enti bere a wogyaa nnipakuw no kwan wiei no, wɔde no kɔe saa ara wɔ ɔkorow no mu, na na akorow foforo nso ka ho.+ 37 Afei mframa dennen bi bɔe, na asorɔkye no bɔ baa ɔkorow no mu ma ɛkaa kakraa bi na anka nsu rebu afa ɔkorow no so.+ 38 Nanso na ɔwɔ ɔkorow no akyi ada sumii so. Enti wonyanee no bisaa no sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, enti yɛrebewuwu yi ɛmfa wo ho?”+ 39 Ɛnna onyanee, na ɔteɛteɛɛ mframa no ka kyerɛɛ po no sɛ: “Gyina! Yɛ dinn!”+ Na mframa no ano brɛɛ ase, na ɛyɛɛ dinn.+ 40 Enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Dɛn nti na ehu aka mo? Munni gyidi koraa anaa?” 41 Na ehu kɛse kaa wɔn na wɔkeka kyerɛɛ wɔn ho sɛ: “Hena koraa ni na mframa ne po mpo tie no yi?”+